अमिताभ बच्चनको ‘गुलाबो सीताबो’मा किन हंगामा छ? – Lokpati.com
पक्राउ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाल प्रहरी प्रधानमन्त्री चितवन केपी शर्मा ओली सरकार नेपाली काँग्रेस राशिफल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मृत्यु अपराध प्रचण्ड अमेरिका
अमिताभ बच्चनको ‘गुलाबो सीताबो’मा किन हंगामा छ?
काठमाडौं, ५ जेठ। सिनेमा घरहरूमा कोरोना भाइरसका कारण ताला लागेको छ।
यस कारणले गर्दा, सिनेमा घरका मालिकहरूले विगत दुई महिनादेखि कमाई गरिरहेका छैनन्, अब भने उनीहरूले नयाँ चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने भएको छ। वास्तवमा, अमिताभ बच्चन र आयुष्मान खुरानाको सुजित सरकार निर्देशित फिल्म ‘गुलाबो सीताभो’ ओटीटीमा अर्थात सिधा सिनेमाघरहरूको सट्टा शीर्ष प्लेटफार्म अमेजन प्राइममा रिलीज गर्ने निर्णय भएको छ।
यही कारणले गर्दा सिनेमा घरका मालिकहरू डराएका छन्, किनकी यदि नयाँ फिल्महरू अन्य प्लेटफर्ममा सीधा रिलीज गरियो भने, यी थिएटरहरू बन्द हुने सम्भावना हुन सक्छ।
फिल्म ‘गुलाबो सीताबो’ बाहेक, विद्या बालनको फिल्म ‘शकुन्तला’ पनि अमेजन प्राइममा रिलीज भइरहेको छ। निर्माता र निर्देशकको यो निर्णयले सिनेमा मालिक र चलचित्र प्रदर्शकहरुमा ठूलो असन्तुष्टि ल्याएको छ।
कसले के भन्यो?
सिनेमा मालिक र प्रदर्शनी संघ भारतीयका अध्यक्ष नितिन दातारले भने, ”हामी फिल्महरू ओटीटी प्लेटफर्ममा सोझै रिलीज गर्न चाहँदैनौं। यदि उनीहरूले यस्तो कदम चाल्नुपर्थ्यो भने उनीहरूले पहिला हामीसँग छलफल बिना निर्णय लिनु हुँदैनथ्यो।”
” फिल्म निर्माताहरूले फिल्ममा लगानी गर्ने तरिका, प्रदर्शनकर्ताहरूले पनि सिनेमाघरहरूमा धेरै लगानी गरेका छन्। यदि उनीहरू सबैको समस्या बुझ्छन् भने ठूलो निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ, चाहे यो पैसाको लागि हो वा कुनै कारणका लागि। पहिले उनीहरूले छलफल गर्नेछन् र निर्णय गर्ने थिए।”
नितिन दातार भन्छन्, ”प्रदर्शनीकर्ता र चलचित्र उद्योगले सरकारसँग कुरा गर्नु पर्छ। सानो बजेट फिल्ममा हामी ५० प्रतिशत राजस्व निर्माताहरूलाई दिन्छौं। हामीले निर्माताहरूलाई यति धेरै समर्थन गरेका छौं। अब निर्माताहरूलाई सहयोग गर्ने समय आइसकेको छ।” त्यसोभए यदि उनीहरूले यस्तो प्रकारको काम गर्छन् भने हामी धेरै कष्ट भोग्नेछौं।
उसले भने, – जहाँ उनी दुई महिना बसे, उनी अझै दुई महिना बस्न सकेन? यस्तो निर्णयले लाखौं मानिसलाई बेरोजगार बनाउँदछ किनभने थिएटरमा चेन सिस्टम चल्दछ, जस्तै डाइनिंग क्यान्टिनमा काम गर्ने धेरै व्यक्ति, पार्किंग, सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी आदि। यदि त्यसो हो भने बेरोजगारी बढ्नेछ।
नितिन दातार भन्छन्,” मलाई लाग्दो अर्को कुरा यो हो कि सेंसर गरिएका फिल्महरू ओटीटी प्लेटफर्ममा आउँछन् जुन यी वेब सिरीजहरू आउँदछन्। हामी सबै मिलेर सरकारबाट एक हल पत्ता लगाउन सक्छौं कि सिनेमाघर कहिले सुरु हुन्छ। दीपावली पछि, त्यसो भए पक्कै, नत्र हामीले कुर्नुपर्नेछ। यी सबै कुरा सरकारमा कुरा गर्न सकिन्छ जुन घटित थिएन। ”
यस मुद्दामा, जी मल्टिप्लेक्स र मराठा मन्दिर सिनेमाका कार्यकारी निर्देशक मनोज देसाईले भने, ”ठूला बजेटका फिल्महरूको साथसाथै साना बजेटका चलचित्रहरू पनि एकल थिएटरमा जान्थे। तर आउनेवाला समय हाम्रो लागि कठिन हुनेछ। महाराष्ट्रमा सबैभन्दा बढी कोरोनाका केसहरू छन्। त्यसोभए, सिनेमाघरहरू कहिले खोल्नेछन त। त्यस्तै निर्देशकहरू जसका फिल्महरू पूर्ण रूपमा तयार छन्। ”
उनले भने, ”अक्षय कुमारको सूर्यवंशी चलचित्र आउँदैछ। धेरै खर्च आउँछ, फिल्म ओटीटी प्लेटफर्ममा चल्दैन। उनी निश्चय नै थिएटर नखुल्दासम्म बस्नेछिन् किनकि त्यस्ता फिल्महरू ठूला पर्दामा देख्नुपर्दछ। हामी पनि पर्खिरहेका छौं। सबै ठूला फिल्महरू सिनेमाघरमा रिलीज हुने र अक्षय कुमार आफैले भनेका थिए कि म आफ्नो फिल्म लक्ष्मी बम ओटीटी प्लेटफर्ममा ल्याउनेछु तर चाहे सूर्यवंशी हामी पर्खन्छौं थिएटरले पनि यो कहिले सुरु हुने खुल्छ।” बाँकी प्रमुख फिल्महरू पर्खिरहेका छन्।
मल्टिप्लेक्स चेन आईनोक्सले आफ्नो आधिकारिक बयानमा भने, ”यो कठिन समयमा अत्यन्तै दुःखको कुरा छ कि हाम्रा एक सहकर्मी आपसी लाभदायक सम्बन्धलाई जारी राख्नमा इच्छुक छैनन्। त्यो पनि जब हामी काँधमा काँधमा हिंड्नुपर्दछ र फिल्म उद्योगलाई यसको जीवन्त स्वरूपमा फिर्ता ल्याउन आवश्यक छ। त्यस्ता कार्यहरूले आपसी साझेदारीको वातावरणलाई प्रदूषित गर्छन् र यो सामग्री निर्माता सधैं सँगै हुँदैनन्। सूट पार्टनरको सट्टा छविलाई प्रस्तुत गर्नको लागि मात्र हेर्नु हुँदैन।”
उनले निर्माताहरुलाई सिनेमा घरमा रिलीज गर्न अपील गरे।
त्यस्तै कार्निवल सिनेमाका सीईओ मोहन उमरोटकरले पनि यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ”हरेक फिल्म निर्मातालाई आफ्नो चलचित्र सिनेमाघर वा ओटीटीमा प्रदर्शित गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार छ। हामी हताश छौं, तर हामी केही हदसम्म छौं। यो गर्न सक्दैन। हामी निराश छौं किनकि हामीले यस पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं। यदि फिल्महरू ओटीटीमा फर्कन्छन् भने यसले हामीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।”
उनी भन्छन्, ”यस भन्दा पहिलेका फिल्महरू ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलीज भइसकेका छन् तर राम्रो प्रतिक्रिया भने पाएनन्। फिल्म निर्माता जो धेरै बजेट छन् धेरै ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलीज गरेमा धेरै नोक्सान बेहोर्न सक्छन्। आशा छ सबै चाँडै राम्रो हुन्छ र चलचित्रहरू थिएटरमा प्रदर्शित हुन्छन्।
प्रदर्शनीकर्ता र सिनेमा मालिकहरूको आक्रोश देखेर प्रोड्यूसर गिल्ड अफ इंडियाका वरिष्ठ सदस्य मुकेश भट्टले भन्छन्, ”कुनै पनि निर्देशक र निर्माताले ओटीटी प्लेटफर्ममा आफ्नो फिल्महरू सोख वा मुटुको आधारमा रिलीज गर्न चाहन्छन् भने उनीसँग बाध्यता हुन्छ यो निर्णय भएको हुनुपर्छ। तस्विर तयार छ, थियेटर खोल्ने सम्भावना छैन। ”
उनले भने कि थियेटर छ महिना पछि पनि खोलिए पनि कोही आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी के हो? हामी कोरोना भाइरस खोप छिटो भन्दा छिटो बनाउन र फेरि थिएटर सुरु गर्न चाहान्छौं किनकि हाम्रो आम्दानी थियेटरमा निर्भर गर्दछ। हामी थियेटरको बिरूद्ध छैनौं, तर यदि निर्माताले यिबलण लिएको छ र चासो गुमाउँदै छ र लामो समयसम्म फिल्म राख्ने क्षमता छैन भने त्यस्तो फिल्म इत्त् प्लेटफर्ममा रिलीज हुन दिनुपर्दछ।
मुकेश भट्ट भन्छन्, ”बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै फिल्म ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलीज हुनुपर्दछ। यसमा कुनै झगडा हुनु हुँदैन तर हामी सबै एकजुट हुनुपर्दछ भने हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न यस समस्यासँग लड्न सक्दछौं।” अब तिनीहरू एक अर्कासँग झगडा गर्न थाल्छन्, यदि तिनीहरूले एक अर्कालाई सहयोग गर्दैनन्, तब उनीहरू कसरी अझ काम गर्दछन्। त्यहाँ कुनै शक्ति छैन र तपाइँ उनीहरूलाई भोकमरीले मर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। हाम्रो चासो यो छ कि थिएटरको व्यवसायलाई हानि नहोस्। यो सोच्नु गलत कुरा हो। जब निर्देशक र निर्माताले अमिताभ र आयुष्मानसँग एक तस्वीर बनाइसकेका थिए भने यो उनीहरूको लागि हुनुपर्दछ र तिनीहरूको नोक्सान भइसकेको छ र अब उनीहरूको हानी हुने कुनै प्रयास छैन। उनीहरूको असहायता देखेर तिनीहरूप्रति सहानुभूति देखाउनुहोस् र उनीहरूसँग झगडा हुनुहुन्न ”।
अमिताभ बच्चन र आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म ‘गुलाबो सीताबो’जून १२ मा अमेजन प्राइममा रिलीज हुँदैछ।
५० लिटर अबैध मदिरा नष्ट
सीमाको विषयमा सेनापतिलाई जवाफ दिन लगाउनु गलत हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली